Countiyada oo loo soo jeediyay in ay tiraan shaqaalaha uunan waxqabadkooduu wanagsaneyn – The Voice of Northeastern Kenya
Countiyada oo loo soo jeediyay in ay tiraan shaqaalaha uunan waxqabadkooduu wanagsaneyn
Maamul goboleedyada dalka ayaa loogu baaqay in ay shaqada ka eryaan shaqalaha anan waxqabadkoodu muuqanin si loo yareyo qarashka ku baxa musharadka oo la sheegayo in uu aad u sareeyo.
Michael Cheresem oo ah guddoomiyaha gudiga qoondeeya dhaqliga ka soo xarooda cansuurta la aruuriyo ayaa xusay in hadii countiyada ay ku dhaqaqaan tallabadan ay helayaan lacago dheeri ah oo loo adegsan karo mashariicda horumarineed.
Wuxuu intaas ku daray in musharka la siiyo shaqalaha maamul goboleedyada uu yahay mid ku kaco in badan oo ka mid ah lacagaha ay wasaarada maaliyada countiyada u qoondeysay.
Dhanka kale wuxuu countiyada in ka badan boqolkiba 35 ee lacagaha loo qoondeyay u adeegsaday mushar bixinta ugu baaqay in ay dhiman tirada sarakiisha kala duwan ee ka howl galo waaxyaha countiyada iyada oo lagu saleynayo waxqabadka qofkaasi.
Arrintan ayaa ku soo begmeysa iyada oo dhanka kale gudigan uu sheegayo in mushar kordhinta ay doonayaan howl wadeenada caafimadka uunan hada suurta gal ahayn maadama lagu tilmaamayo mid aad u sareeyo.
← Dowlada oo tageereyso in meesha laga saaro xukunka dilka ee lagu fuliyo dambiilasyaasha kala duwan
Shacabka ku dhaqan magaalada Naivasha oo ka soo hor jeeedo in tuutada laga saaro wadadii uu shilka ka dhacay →